Qolalka quruxda badan ee Fendi ee Rome | Ragga Stylish
Qolalka Fendi waa mid ka mid ah meelaha ugu qurxoon ee lagu nagaado Rome. Fendi waa shirkadi ugu dambeysay ee Talyaani ah ee raaxada si ay isugu daydo nasiibkeeda aduunka martigalinta. Armani, Versace ama Bulgari ayaa ka horreeyay.
Wixii naqshadeeyeheeda, Talyaaniga Marco Costanzi, qolalka Waxay ka deggan yihiin guri gaar loo leeyahay qolka hudheelka. Wuxuu ku sifeeyay waaya aragnimada "joogitaanka guriga Fendi oo ku yaal bartamaha magaalada." Garan maayo adiga, laakiin waxay umuuqataa fikrad fantastik ah oo xagga jacaylka ah igala soo bax.
Waxay ku yaalliin shan daqiiqo socod ah oo laga bilaabo Talaabooyinka Isbaanishka ee caanka ah, iyada oo loo sii marinayo soo jiidashada Via Condotti, qolalka gaarka loo leeyahay ee Fendi waxay ku yaalliin dabaqa saddexaad ee Palazzo Fendi oo dhowaan la dayactiray, Dukaanka caanka ah ee astaanta, kaas oo albaabada loo furay 12 sano ka hor.
Waxay ka kooban tahay toddobo qol iyo dhowr qol oo caadi ah, oo isku dhafan walxo asli ah iyo kuwo cusub, iyagoo abuuraya a jawiga qumman ee casriga ah taas oo marmartu ka noqoto wax xiddigta ah, oo cashuur siisa Rome iyo taariikhdeeda. Qaar badan oo ka mid ah alaabta guriga iyo walxaha lagu qurxiyo ayaa ka yimid Fendi Casa, sidee bay noqon kartaa si kale, laakiin sidoo kale waxaa jira meel loogu talagalay qaybo gaar ah oo uu naqshadeeyay Costanzi laftiisa, oo ay ku jiraan sariiraha
Cuntada waxaa bixiya Ciampini Bistrot oo u dhowIn kasta oo ay jiraan qorshayaal lagu furayo Zuma, silsilado makhaayadaha Jabbaan ah oo durba laamo ku leh London iyo New York, dabaqa shanaad bisha Maarso.
Joogitaanka qolalka qaaliga ah ee Fendi Qiimuhu waa 350 euro habeenkii. Meel aad ku raaxeysan karto joogitaan wacan oo aad si sax ah u fahmi karto aragtida raaxada ee shirkadda Talyaaniga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Qolalka Fendi, mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee lagu nagaado Rome
Hufan iyo xirfadle ah - Kala tagga dhinaca wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah timaha sannadka